अधिकतम कारोबार हुने १० मा ७ वटा कम्पनी बिमाकै, कुन–कुन हुन् यी कम्पनीहरु | Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.
Published date : 2018-04-18 Your IP - 3.80.55.37
काठमाडौं : पुँजी बजारमा मंगलबार विशेष गरी बिमा कम्पनीहरुमा बहार आएको छ । बिमा कम्पनीहरुको पछिपछि माइक्रोफाइनान्स र होटेल समूह पनि कुदेका छन् । यी ३ समूहमा तेजी आउँदा समग्र नेप्से सूचक ३३.६१ अंकले बढेर १३३१.१८ बिन्दुसम्म पुग्न सफल भएको हो । कारोबार रकममा पनि बिमा कम्पनीहरुकै वर्चस्व देखिएको छ ।
धेरै कारोबार भएका १० वटा कम्पनी मध्ये ७ वटा बिमाकै परेका छन् । प्रमुख १० मा बाँकी ३ वटामा कुमारी बैंक, नागरिक लगानी कोष र फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक परेका छन् । कारोबार भएका ७ बिमा कम्पनीको मात्रै २० करोड २८ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको सेयर किनबेच भएको छ ।
जसमा सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्नेमा पहिलो र दोस्रोमा क्रमशः सूर्या लाइफ इन्सुरेन्स र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स रहेका छन् । सूर्याको मात्रै करिब ६ करोड रुपैयाँको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । यसैगरी, नेपाल लाइफको पनि ३ करोड १० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको सेयर किनबेच भएको छ ।
बाँकी ५ बिमा कम्पनीको पनि २ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर किनबेच भएको छ । जसमा लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्सको २ करोड ३६ लाख, प्रिमियर इन्सुरेन्सको २ करोड ३५ लाख र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको २ करोड १९ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै सेयर कारोबार भएको छ ।
उता, नेपाल इन्सुरेन्सको २ करोड १३ लाख र नेको इन्सुरेन्सको पनि २ करोड १३ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको सेयर किनबेच भएको देखिन्छ ।